Uhlolo lwe-XL 1200N Sportster Nightster Review - Harley Davidson
Ukuhlaziywa kwe-Harley-Davidson Nightster kwi-Sportster Owner
Ndisoloko ndibe ngumfana we-Sportster - ndikhwela i-XL Deluxe ka-1993 endiyenayo ukususela ngo-1994. Ngoko xa ithuba lokuvavanya i-2007 Harley-Davidson XL 1200N Sportster 1200 Nightster yafika indlela yam, ndagxuma. I-Harley-Davidson Nightster ka-2007 yongeza kwangoko kwintsapho yeXL. Ukuthatha intengo ye-$ 9,595 (i-dollar 10,675 njengoko ihlolwe ngepeyinti ezimbini zeetoni kunye ne-HD Factory Security System), i-Nightster iza ne-warranty yeenyanga ezingama-24 / ezingenamkhawulo, kunye nokulinganiswa koqoqosho lwamafutha kwi-premium ye-non -aded gas (42.4 mpg) .
I-Nightster ingummzobo ebumnyameni. Ibhayisikili yam yokuhlola yayigqoke i-Suede Blue Pearl yimizuzu emibini kunye nomsebenzi wepayipi onoMbala oMnyama (kukho ezinye iilbos ezimbini ezithatha iifowuni ezifumanekayo ngaphezu kobonke abamnyama). . Ukongeza, ukupenda, kukho inani elongezelelweyo nelinokukhuphisana kunye neetayili, ukusuka kumbhaka omnyama ukuya kumathambo amnyama kwi-aluminium satin kwi-chrome emnyama ehlotshiswe kwi-chrom. I-bike kuphela ekhoyo kwi-Harley lineup efika kufuphi kwiinkalo ezahlukeneyo zonyango yi-Softail FXSTB Night Train.
Akunjalo ukuba i-bike ibhekiselele ekugqibeleni. Kukho ukuguqulwa okufihlakeleyo (kunye nokungabonakaliyo) ukutshintshela kwi-Sportster ishicilelo yesitye kunye ne-hardware. I-fender yangasemva ikhehliwe kwaye idityaniswe ukujonga okucocekileyo. Ilayisenisi yepenisi yeelayisti iye yahlonyelwa kwakhona njenge-side-mountunit.
I-stock taillight ithathelwe indawo kunye ne-bar encane encane yokukhanya ephuma phantsi komlomo we-back fender. I-retro emnyama yerobhothi i-fork gaiters igqoka imilenze engama-39 mm. Amasondo omnxeba (19 "x 2.5" ngaphambili, 16 "x 3.0" ngasemuva) anama-black hubs kunye neerms ngeetholi ezingenasici. I-front fender ephakamileyo kunye nomlindi wamasango omva sele idibene kunye nezimbobo ezikhanyayo, njenge-bobster-school bobster.
Ngalo lonke le nkcazo yenkcazelo, kukuhlazola ukuba i-wiring kunye ne-tubing kwi-Nightster ibubi kangaka kwaye ibuhlungu. Iimangqa zetambo kunye ne-hose zigijima kwinqanaba leerandi, zikhangeleka zingabonakali kwaye zisengozini. Yuck.
Iyaqhubeka ngezantsi ...
Ndiyindoda enkulu - ndima 6'2 "kwaye ndi-bon-biged, njengokuba thina batyhola abantu bathi, kodwa ndihlala ndifumana isakhelo se-Sportster kunye nesakhiwo esinelisekile ngobukhulu bam. kwaye usebenzise ubusuku be-Sportster kunye nokuphakama kwesihlalo esisezantsi (ngaphezu kwe-26 "engavunywanga ngokumelene ne-29.9" ye-XL 1200R Roadster), kunye ne-bar style style-drag-drag that stretches your arms above the style of buckhorn style Uza kufumana kwi-stockist ye-Sportsters. Izikhonkwane zeenyawo kunye neendlela zokulawula zibekwe ukubonelela indawo ejikelezayo, ngokungafani ne-La-Z-Boy isikhundla sokuhlaziya esilawuliweyo phambi kwe-XL 1200 C Custom Custom.
Iibrafu ezicwangcisiweyo zibonelela phambili. I-Instrumentation iyinto encinci kwaye iyilula - indlu yeso sixhobo sejikelezileyo iphakanyiselwe kwiziko leemivalo, ikhaya kwi-analog ye-spealetereter kunye ne-odometer / imitha yokuhamba, kunye nezibane ezimbalwa kunye neziboniso. Akukho nto, ayikho i-gauge gauge, ayikho iqondo lokushisa, akukho thermometer - ngokwenene, akukho nto eninzi.
U-Harley uhlambulule entanyeni yomdlalo we-Sportster kwiminyaka embalwa edlulileyo, ukuphelisa imichilo ye-lock ye-fork lock, nokuyifakela nge-lock ye-fork yokukhiya esebenza kunye nencoko efanayo njengoko utshaya. Ngoku bafuna nje ukuthatha isinyathelo esilandelayo esilungileyo kwaye badibanise iskhiya somlilo kunye nenkikhi yefolokhi.
Ukulawulwa kwesandla se-nightster, ibha kunye ne-bar-front-bered-reservoir yonke into emnyama-ngaphandle, njengokuba isalathisi esiphezulu se-bar ehamba phambili kunye nekhanda elikhanyayo. Akukuphela nje oku kukhangeleka kakhulu, kunomvuzo wokunciphisa i-glare kunye nokucinga ngendlela.
Injini ye-1200cc ye-Nightster i-rubber ephakanyisiwe kwisakhelo, inguqu enkulu kwi-Sportster yam ubudala. Ukuzihlukanisa kuyamangalisa induduzo yebhayisiki kwaye yenza ukuba izibuko zisebenzise ngokukhawuleza. I-twin ye-Evolution V-i-Twin i-air-cooled air-level is rated to deliver 79 ft-lbs of torque @ 4000 rpm.
U-Harley akayikukhulula amanani aseburhulumenteni - ivenkile yam yasemakhaya yathi i-stockstock yabo yesilinganiso ilinganiselwa kuma-60 aphezulu kwi-dyno. I-teknoloji iyazi kakuhle - intonga ye-push-rod esebenzayo i-valves phezu kwe-cylinder kunye nabasindisi be-hydraulic; ukudluliselwa kwejubane ezintlanu kunye ne-clutch wet; umqhubi wokugqibela oqhutywe ngamakhankethi kunye nokuqhubela ibhande. I-Nightster ihamba ngokuqhelekileyo kunye ne-elektroniki ye-port injection injection (ESPFI). Kuyamangalisa ukuba ukuqhubela phambili kwezobugcisa akuzange kususwe umgca wesithuthuthu somzila esiye sasijikeleze iminyaka engamashumi amahlanu.
Ukuphakama kwesitulo esiphansi saseNsterster kwafezwa ngokunciphisa ukutshatyalaliswa kwangemva nokukhupha isihlalo. Ndalindele ukuba ukuhamba okufutshane kufumane ukuphazamisa imvume, kodwa ndandimangalisiwe xa ndifumanisa ukuba i-Nightster iphatha kakuhle kakuhle. Nangona ibhayisikili ivakalise ukuba ivakale kwiiminyango zayo, andizange ndigubungele phantsi, kwaneenxa zonke ezijikelezayo. Iiphampu, nangona kunjalo, kwakungomnye umcimbi. Iphunga elibukhali okanye i-pothole idlulisa i-jolt enzulu emthonjeni, uzive ngathi ufana ne-hardtail. Ukukhutshwa kwinqwelo epholileyo kwisihlalo akuncedi nonke. Ndandiphakamisa ukukhwela ngenyameko, nangona ngqalelo ngakumbi kunezinto eziqhelekileyo kwiimeko zomhlaba.
I-Nightster inokuqhutyelwa ukukhwela. Ikhawuleza ngokukhawuleza, imisa ngokuhlakanipha kwaye iziphatha njenge-Sportster. Ndiyavuma ukuba ndiyathanda ibhayisikili ehlala phezulu phezulu kwaye ivakalelwa encinci, kakuhle, i-sportier. Kwiindawo ezidolophini zasezidolophini, u-Nightster uzizwa esengozini. Kuphantsi kakhulu, kunzima ukubona ebusuku, kwaye kwihlabathi eligcwele i-SUVs iresiphi yenhlekelele.
I-Nightster ibhayiseki yeendawo zokuhamba ngaphandle kweendlela, kungekhona kwiiklabhu zedolophu.
Yonke imveliso yama-Harley ibonisa ukuqala kohambo lokuzikhethela kwaye kunye nokuyila kwayo epholile, i-nightster inokuyenza kunye nokuhlenga. I-stock slash-cutting cut-in-mufflers igcina ingxolo phantsi, mhlawumbi ngaphezu kwam endikuthandayo- ndinokuya kwisethi ye-Eagle Ekhwazayo "umqhubi wendlela kuphela" yeefayili epholileyo yokukhupha, njengabo bonke abanye abadlali beC Sportster kubonakala ukuba yenze. Iifolokhwe zangaphambili ziza kusebenza kangcono ngemithombo eqhubela phambili kunye neoli elukhulu, kwaye mhlawumbi i-postmarket brace. Ukuba indlela yakho eqhelekileyo ibandakanya iindlela ezihamba phambili, unokufuna ukutyalomali kwi-windscreen-felt like a kite ehamba ngesivinini. Hayi, kwaye ke kukho imigca ye-steel brake engabonakaliyo , i-gel ihamba, i-bar-and--shield-shield weights, kunye nezinye izinto ezingabinayo kwi-khathalogu ye-HD. Okanye, unokunandipha ukulungelelaniswa kwezinto zokuqala zokwenziwa kwe-Nightster kunye nokusebenza, kwaye uyishiye yedwa.
U-Nightster akayi kuba ngowokuqala kukhetho kumdlalo we-Sportster - ndiza kukhetha iMeko njengendawo yam yokuqala. Kodwa ukuphakama okuphantsi kwesihlalo, umzobo oyingqayizivele kunye namava ahlanzekileyo kwi-Sportster, i-Nightster inika.
2008 I-Gold Gold Wing Test Term Term - INgxelo # 10
Imibuzo kunye neMibandela
Ukufaka isicelo soNcedo lweNkathazo lwe-FEMA Federal
10 Abaxhamli beLadies Love
Izinzuzo ze-Private Sector Sector '
I-New England Conservatory Admissions
Imbali kunye neNgcaciso yeSellar Cell